5 ဥရောပမှာတော့ရထားဖြင့်ခရီးသွားများအတွက်သိကောင်းစရာများ | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >5ဥရောပမှာတော့ရထားဖြင့်ခရီးသွားများအတွက်သိကောင်းစရာများ
စာဖတ်ချိန်:4မိနစ်များ(နောက်ဆုံးတွင်နောက်ဆုံးရေးသားချိန်: 18/02/2020)
မြင် အတှေ့အကွုံ ဒါကြောင့်အများကြီးပိုနေတဲ့ဥရောပရထားစွန့်စားမှုအပေါ်စတင်နေဖြင့်. ဥရောပ၌ရထားခရီးသွားလာမှုအတွက် quintessential နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည် ဥရောပနိုင်ငံတွေကိုခရီးလှ ထိုသို့အဘယ်ကြောင့်အဘယ်သူမျှမနက်နဲသောအရာဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ ရထားလမ်းကွန်ယက်ကို ဖြစ် ခရီးသွားများအတွက်အောင်နိုင်နိုင်အောင်အလွန်အမင်းဖွံ့ဖြိုး တဦးတည်းမော်ကွန်းခရီးစဉ်အတွက်မျိုးစုံနိုင်ငံများနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများ. ခရီးသွားမဆိုပုံစံနှင့်ဝသကဲ့သို့, သငျသညျဖြစ်နိုင်သောအလွယ်ကူဆုံးနှင့်အများဆုံးပျော်စရာခရီးရှိသည်သေချာစေရန်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြင်ဆင်ထားရန်ကောင်းသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. ဤတွင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့များမှာ5ဥရောပ၌ရထားခရီးသွားလာမှုအတွက်အကြံပေးချက်များ.
အကယ္၍အထက္ 14 နေ့ရက်များ – သုတေသနအညီရထားဖြတ်သန်း
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်ဖို့စီစဉ်နေတယ်ဆိုရင် မြောက်မြားစွာနိုင်ငံများ ဥရောပ၌ရထားခရီးသွားစဉ်ကတစ်ဦး Interrail Pass ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံစဉ်းစားရန်ပညာရှိဖြစ်စေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်မဟုတ်တဲ့အီးယူနိုင်ငံသားတွေဟာမခေါ်အဘယျသို့ Eurail. တစ်ဦး Interrail Pass ကိုသင်၏အစေမည် မီးရထားခရီးသွားလာ ပိုလွယ်လိုက်တာ. သို့သျောလညျး, သင်တစ်ဦးအပေါ်လျှင် တင်းကျပ်တဲ့ဘတ်ဂျက်, တစ်ဦးချင်းစီလက်မှတ်တွေစျေးသက်သက်သာသာထွက်အလုပ်လုပ်စေခြင်းငှါ (သငျသညျအဓိကအားဖွငျ့အရှေ့ခရီးသွားလာနေသောအထူးသဖြင့်လျှင် ဂျာမနီ). သင်သည်သင်၏ရထားလမ်း Pass နှင့်စာအုပ်ဆိုင်ရှေ့၌သင်တို့ဘတ်ဂျက်စဉ်းစားကြည့်ပါနှင့်အချို့သောသုတေသနပြုပါ. ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက် saveatrain.com ဥရောပတလွှားကသင်၏ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ကူညီပေးဖို့စတင်နိုင်ရန်စုံလင်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
Cologne ရထားမှ Frankfurt
Cologne ရထားမှ Hanover
ရထားလက်မှတ်တွေ နှင့်ထိုင်ခုံသံသယနှစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောအရာဖြစ်ကြ၏. တစ်ဦးကလက်မှတ်သင်တစ်ဦးရထားပေါ်ခွင့်ပြု, နှင့်ကြိုတင်စာရင်းသင်တစ်ဦးသတ်သတ်မှတ်မှတ်ရထားပေါ်တွင်ထိုင်ခုံအာမခံ. ရှေ့မှာ သင့်ရဲ့ခရီးစဉ် သင်သည်သင်၏ရထားရန်လိုအပ်သည်ရှိမရှိနားလည်သေချာအောင်, အကြံပြု, သို့မဟုတ်ထိုင်ခုံသံသယကိုလက်ခံမထားဘူး.
ဖြစ်နိုင်လျှင်, သင့်ရဲ့ထိုင်ခုံကြိုတင်ယူထားရန်ကြိုးစား, သငျသညျကဲ့သို့သော Uber လူကြိုက်များနိုင်ငံများတွင်ခရီးသွားလာနေသောအထူးသဖြင့်လျှင် ပြင်သစ်, အီတလီ သို့မဟုတ် စပိန်. ဥရောပ၌ရထားအရှိဆုံးနယ်လှည့်အဘို့, သင်သည်သင်၏ထိုင်ခုံကြိုတင်ယူထားရန်လိုအပ်သည်မဟုတ်, သို့သော်, ရထား boarding နှင့်အဘို့မျှော်လင့် အကောင်းဆုံး အကောင်းတစ်စိတ်ကူးမဟုတ်ပါဘူး. သင်သည်သင်၏ထိုင်ခုံနှစ်လယ်ပိုင်းထဲကရဖို့ပြောသည်နိုင် ခရီးသွားခြင်း တစ်စုံတစ်ဦးကကြိုတင်ဘွတ်ကင်လျှင်. သင့်နေရာသီးသန့်ဖယ်ထားခြင်းအားဖြင့်, သင်တစ်ဦးအတန်းမှာသို့မဟုတ်ဝင်းဒိုးကိုထိုင်ခုံချင်ပါတယ်ရှိမရှိရွေးချယ်နိုင်ပါသည်. သငျသညျကိုပြန်ထိုင်နှင့်ခံစားနိုငျ ရထားစီးနင်း သငျသညျအပြောင်းအရွေ့ဖို့ကြားဖြတ်မည်မဟုတ်ပါ သိ..
ဥရောပ၌မီးရထားနဲ့ခရီးသွားကြသည့်တစ်ဦးအဖြစ်လူသိများသည် ခရီးသွားလာလုံခြုံဆုံးနည်းလမ်းတွေ. သို့သျောလညျး, ခါးပိုက်နှိုက်အဘို့မျက်စိထွက်စောင့်ရှောက်ရန်အရေးကြီးသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, အထူးသဖြင့်အဓိကမြို့ကြီးများအတွက်ရပ်တန့်ကြောင်းရထားနှင့်အတူ. unguarded သင့်ရဲ့အိတ်စွန့်ခွာမနေပါနဲ့ ရထားပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ထဲမှာ ဘူတာရုံ. အပေါ် ညဥ့်ရထား, သငျသညျအိပျပျြောဖို့ရည်ရွယ်ထားလျှင်, သေးငယ်တဲ့စက်ဘီးသော့ခတ်နှင့်အတူထိန်သိမ်းဖို့အိတ်ကိုလုံခြုံရေးအတွက်သေချာအောင်. စိတ်ငြိမ်သက်ရှိသည်, သင့်ရဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရန်သင်၏အဝတ်အောက်မှာတစ်ခါး pack ကိုဝတ်ဆင်, ဖုန်းကို မည်သည့်အလားအလာသူခိုးတွေကနေကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်မဆိုအရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်းများ.
ဒီထက်ပို – ဥရောပ၌ရထားခရီးသွားလာမှုအတွက်အကြံပေးချက်များ
ကနေ Going တိုင်းပြည်နိုင်ငံတစ်ခု သို့မဟုတ်မြို့တမြို့သို့ပျော်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ခရီးဖြစ်ပါသည်. သို့သျောလညျး, သင်တစ်ဦးလေးလံဝန်တင်ဆောင်လျှင်ခရီးပင်ပန်းတယ်ဖြစ်လာနိုင်ပါသည်. လိုအပ်ထုပ်ပိုး နှင့်နောက်ကွယ်မှမလိုအပ်လျက်ရှိသောမည်သည့်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စွန့်ခွာ.
သင်တို့အပေါ်မှာခရီးသွားလာနေသောရထားပေါ် မူတည်., ဥရောပ၌ရထားခရီးသွားသည့်အခါထိုင်ခုံကျော်ထိန်သိမ်းခြင်းနှင့်စင်ပေါ်အတွက်ကန့်သတ်သိုလှောင်ရန်နေရာရှိနိုင်ပါတယ်. အစား ကြီးမားတဲ့နှင့်မိုးသည်းထန်စွာခရီးဆောင်လက်ဆွဲသေတ္တာတင်ဆောင်လာသော, အရည်အသွေးပေါ့ပါးကျောပိုးအိတ်သင့်ရဲ့ဝန်ပေါ့ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်.
ဥရောပ၌ရထားကိုထောက်ပံ့ပေးခရီးသွားလာ စိတ်လှုပ်ရှားအမြင်များ; သို့သော်, သင်ထက်ပိုတဲ့ခရီးစတင်နေကြသည်အထူးသဖြင့်လျှင်အချိန်လွန်သွားကူညီအနည်းငယ် key ကိုပစ္စည်းများကိုယူဆောင်လာရန်အကောင်းတစ်စိတ်ကူးက2နာရီ. စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ပါ, တစ်ဦးကိုစောင့်ကြည့် ရုပ်ရှင် သင့်ရဲ့တက်ဘလက်, သင့်ရဲ့ခရီးသွားဂျာနယ်ထဲမှာရေးလိုက်သို့မဟုတ်အခြားခရီးသည်တစ်ဦးစကားလက်ဆုံတက်ဒဏ်ခတ်နှင့်သင်သိမီသင်၏နောက် destination သည်မှာဖွစျလိမျ့မညျ.
ရထားအများစုမှာစားသောက်ဆိုင်တခုရှိတယ်, ကဖီးရထားသို့မဟုတ်အသားညှပ်ပေါင်ရောင်းခြင်းဖြင့်လာရေစာလှည်း, အချိုရည်နှင့်ပိုပြီး. သင်တို့မူကားတစ်ဦးတင်းကျပ်စွာနယ်လှည့်ဘတ်ဂျက်အပေါ်များမှာသို့မဟုတ်သင်တိကျတဲ့ရှိပါက အစားအသောက်လိုအပ်ချက်, သင့်ရဲ့ခရီးအပေါ်သင်နှင့်အတူအချို့သောမုန်ဆောင်ကြဉ်းပညာရှိက.
ဥရောပ၌ရထားခရီး၏စဉ်းစားတွေးခေါ်? ကိုသွားပါ အွန်လိုင်းတစ်ဦးကရထား Save အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်ကိုပုံမှန်အတိုင်းထုတ်စစ်ဆေးနှင့်သင်၏နောက်စွန့်စားမှုစီစဉ်စတင်ရန်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2F5-tips-for-traveling-by-train-in-europe%2F - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, သငျတို့သ / es သို့မဟုတ် / က de နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ / ru ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား မီးရထားခရီးသွားလာအကြံပေးချက်များ traveltips
ရထားခရီးသွားAustriaစတြီးယား, ရထားခရီးသွားဘယ်လ်ဂျီယံ, ရထားခရီးသွားချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ပြင်သစ်ခရီးသွားရထား, ရထားခရီးသွားဂျာမနီ, ရထားခရီးသွားဟော်လန်, ရထားခရီးသွားဟန်ဂေရီ, ရထား Travel အီတလီ, ရထားခရီးသွားလူဇင်ဘတ်, ရထားခရီးသွားလာဆွစ်ဇာလန်, ရထားခရီးသွားအဆိုပါနယ်သာလန်, ဥရောပခရီးသွား